Ziphi kwaye nini ii-VIP eziphezulu kwiMarike yokuHamba yeHlabathi zidibana ngokwenene?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ziphi kwaye nini ii-VIP eziphezulu kwiMarike yokuHamba yeHlabathi zidibana ngokwenene?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • I-WTN
I-WTTC Cocktail e-Chesterfield Mayfair eLondon sisiganeko esikhethekileyo kwii-VIP eziphezulu kwishishini lokuhamba kunye nokhenketho lwehlabathi. Ngokuhlwa, i-2 kaNovemba yayilixesha lokuqala iinkokeli zikwazi ukubonana ngobuqu - kwaye kwakugcwele.
Ihotele yaseChesterfield Mayfair eLondon ibe yindawo engaphezulu kweminyaka engama-20 yeenkokeli zokhenketho ukuba zihlangane kwi-WTTC Cocktail ngobusuku besibini kwiMarike yokuHamba yeHlabathi.
Ngobu busuku yayibubusuku, emva kweminyaka emi-2, xa iinkokeli zezokhenketho zakwazi ukuhlangana, zilibale ngeemaski, kwaye zibambe.
I-UNWTO yayimelwe ngu-Anita Mendiratta. UNobhala Jikelele wahlala engekho.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20, ubuhlobo kunye neshishini laqala okanye laqhubeka kwi-boutique ye-5-star hotel kufuphi ne-Greenfield eLondon, i-Chesterfield Mayfair Hotel.
The Ukhenketho lweHlabathi loKhenketho kwiCouncil minyaka yonke ngexesha leWorld Travel Market imema amalungu, abaphathiswa, kunye nezinye ii-VIPs ukuya kwihotele yewayini, i-champagne, kunye nokutya.
Sesinye sezona ziganeko zifunwa kakhulu ecaleni kweWorld Travel Market.
Lo msitho ngokuhlwanje ibilithuba elihle le-CEO entsha ye-WTTC uJulia Simpson, ukuba athethe namalungu, abaphathiswa, kunye neendwendwe. Uthathe intambo yalo mbutho emele amashishini amakhulu angama-200 kushishino lokhenketho nokhenketho.
Abaphathiswa bezoKhenketho abavela eJordan, eBarbados, eJamaica, nakwiiPhilippines bebephakathi kweendwendwe.
IiPhilippines ziya kuba zibambe iNgqungquthela ye-WTTC elandelayo ngo-2022.
UJuergen Steinmetz, umpapashi we eTurboNews kunye noSihlalo we-WTN, bazimase lo msitho kwaye bathatha le vidiyo imfutshane:
Ukhenketho lumalunga nabantu, kodwa lumalunga neshishini - kwaye luyabonakala kule cocktail ye-WTTC.
Imibutho yeFai Mission uthi:
Novemba 3, 2021 kwi-10: 41
Ndiyaqhubeka ukuva ukuba ababoneleli bakhathazekile ngezicelo zabacebisi ukuba "VIP" abathengi babo ngaphandle kokufumana naziphi na iinkcukacha malunga nokuba yintoni kanye enokuyenza. I-Travel & Adventure Show Series lithuba elivavanywayo kwaye lithathelwa ingqalelo kakhulu lentengiso yokuhamba. Phakamisa uphawu lwakho kwimiboniso yethu yokuhamba!